भ्यालेन्टाइन दिवस को लागी getaways | यात्रा समाचार
भ्यालेन्टाइन दिवस को लागी getaways
कारमेन गुइलन | | गेटवे, रोमान्टिक
म विश्वास गर्दछु कि म केवल एक मात्र होइन जो आज यस प्रश्नको शिर्षकमा हामीले सोधेको प्रश्न गरिरहेछु। भ्यालेन्टाइन डे को लागी कुन प्रकारको भग्न रोज्न को लागी छ? र तथ्य यो हो कि त्यहाँ धेरै सम्भावनाहरू छन्, विकल्पहरूको मूल्य, मूल्य र वेबसाइटहरू जसले "रसदार प्रस्ताव" प्रस्ताव गर्दछ कि हामी हामीले सोच्नु भन्दा बढी शंका गर्छौं।
आज म तपाईंलाई भ्यालेन्टाइन डेका लागि getaways को विकल्पहरू दिन लागिरहेको छु जुन मैले विचार गर्दै छु र आशा छ कि यसले तपाईंको सेवा पनि दिनेछ ताकि तपाईले कुन विकल्प अन्तमा छनौट गर्ने बारेमा अझ स्पष्ट हुनुहुनेछ।
1 उडान + होटेल?
2 होटल वा अलग-होटेल?
2.1 होटल छनौट गर्नका फाइदाहरू
2.2 अपार्टमेन्ट-होटेल छनौट गर्नका फाइदाहरू
3 र कसरी ग्रामीण भाग्ने बारे?
4 टिप्स एक साताको अन्त्य पछाडि जानु भन्दा पहिले
उडान + होटेल?
यदि हामी हाम्रो पार्टनरलाई चकित पार्न चाहान्छौं भने, उसलाई बताउनुहोस् कि यस बारेमा: "हनी, दुई दिन तपाईको झोला पैक गरी हामी जाँदैछौं तर कहाँ नसोध्नुहोस् ...", यो सबै भन्दा रोमान्टिक र सुन्दर छ। र यदि त्यसमा हामी एक गन्तव्य थप्छौं जहाँ गाडी भन्दा गाडी उडानका लागि अप्ट इन गर्न उत्तम हुन्छ, त्यो बम हुनेछ।
के गन्तव्यहरू म सोच्न सक्छु?
तर यदि हामीले यो विकल्पको लागि रोज्यौं भने हामीले के ख्याल गर्नुपर्छ?
सामान्यतया यी प्रकारका getaways सामान्यतया अधिक महँगो हुन्छ, किनकि फ्लाइट होटेल बस्नु पर्छ।
त्यहाँ छ धेरै राम्रो उडान समय सन्तुलित हाम्रो उपलब्धतासँग मिल्नु, दुवै बाहिरबाट र पछाडि मार्गमा, र एकै समयमा सबैभन्दा किफायती विकल्प खोज्नुहोस् ताकि हामी धेरै मूल्य गुमाउनुपर्दैन।
यदि तपाईं हाल "आश्चर्य" का प्रकारहरूमा केहि अधिक खर्च गर्न सक्नुहुनेछ भने, यो निस्सन्देह उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो। इन्टरनेटमा तपाईले असंख्य पृष्ठहरू फेला पार्नुहुनेछ जहाँ उडान र होटलको सवाल समाधान गर्छन्। अधिक के हो, यी प्रकारका मितिहरूका लागि आवास विकल्पहरू सामान्यतया आउँदछन् स्वागत विवरण जस्तो विशिष्ट चकलेट र शैम्पेन, ब्रेकफास्टहरू समावेश, मसाज वा एक घण्टा सौना, आदि।
होटल वा अलग-होटेल?
यदि अन्तमा हामीले देख्यौं कि हाम्रो तालिका उडान मुद्दामा समायोजित गर्न सकिँदैन (हामीले बिर्सनु हुँदैन यो दुई दिन मात्र हो) र हामी अप्ट इन गर्छौं "रोड र कम्बल"हामी मध्ये एक विकल्प जुन हामीसँग प्रस्तुत गरिएको छ, कम्तिमा एउटा जुन म धेरै भन्दा बढी बदल्छु, त्यो हो कि होटल वा अपार्टमेन्ट - होटेल छनौट गर्ने।
होटल छनौट गर्नका फाइदाहरू
तपाईलाई चिन्ता मात्र छ आराम गर्नुहोस्, आराम गर्नुहोस् र राम्रो प्रवास गर्नुहोस् तपाइँको साथीको साथ।
तिनीहरू प्राय: भेटिन्छन् आधा बोर्ड संग राम्रो सम्झौता शामिल.
होटल को विशाल बहुमत मा तपाईं हुन सक्छ पार्किंग क्षेत्र आरक्षित (यदि तपाईंले अनुरोध गर्नुभयो भने)।
अपार्टमेन्ट-होटेल छनौट गर्नका फाइदाहरू
एक अपार्ट-होटल को बसाई छ ठूलो (सामान्यतया) होटेल कोठा भन्दा। तपाईंसँग तपाईंको सानो भान्छा र तपाईंको सानो बैठक कोठा समावेश छ।
तपाईं बिहानको खाजा, खाजा, रातको खानाको लागि होटेलको निश्चित घण्टामा सीमित हुनुहुन्न ... यदि तपाईं "बचत" गेटवे चाहानुहुन्छ भने, तपाईं जहिले पनि सुपरमार्केटमा केहि खरीद गर्न सक्नुहुनेछ र अपार्टमेन्ट होटेलमा नै पकाउन सक्नुहुन्छ।
तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो साथीसँग कहाँ जाने भनेर स्पष्ट हुनुहुन्छ भने, अब तपाईं के चाहानुहुन्छ र कसरी तपाईं 48 XNUMX घण्टा आराम र रोमान्सको मजा लिन चाहनुहुन्छ भनेर अझ स्पष्ट हुन सक्नुहुन्छ।
र कसरी ग्रामीण भाग्ने बारे?
हामी सबै जो शहरबाट आएका हौं, जता पनि दगुर्दै, "धेरै थोरै" सफा हावा सास फेर्दै, हरियो परिदृश्य देख्दैनौं, प्रस्ताव ग्रामीण भाग्नु एकदम रोचक छखास गरी अब जाडोमा। फायरप्लेसको साथ ठाउँमा रहनको विचार, जहाँ तपाईं बाहिर जानुहुन्छ र मानिसहरूभन्दा बढी जीवजन्तु र वनस्पति भेट्टाउनुहुन्छ। विशेष गरी ध्यान आकर्षित गर्दछ।
यस प्रकारको छुटकाराको साथ धेरै सम्भावनाहरू दिमागमा आउँदछन्:
केहि गर्नुहोस् पैदल यात्रा मार्ग.
भ्रमण गर्न सानो गाउँ वरपरबाट
एउटा सानो शहरको हराएको घर लिनुहोस् र साथीहरूको अन्य जोडीहरूसँग सँगै लिनुहोस् र केही दिनको लागि सबै चीजबाट रमाईलो र डिस्कनेक्ट गर्नुहोस्।
यो रमाईलो छैन? मेरो लागि यो getaway को यस प्रकारको लागि एक विजेता प्रस्ताव हो।
टिप्स एक साताको अन्त्य पछाडि जानु भन्दा पहिले
तपाईको रोजाई जे भए पनि हामी तपाईलाई एउटा श्रृंखला दिन्छौं सुझावहरू तपाइँको छनौट गन्तव्य र आवास को लागी जानु अघि खातामा लिन:
यदि तपाईं कारबाट जानुहुन्छ भने, जाँच गर्नुहोस् पाels्ग्रा, तेल, बत्तीहरू, आदि।
यदि तपाईं हिउँले भरिएको ठाउँमा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ भने, नबिर्सनुहोस् साins्गला लगाउनुहोस् (केवल केसमा)।
यदि तपाईं कारबाट कुनै ठाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ भने हामी तपाईंलाई पहिले जस्तो सिफारिस गर्दैनौं ब्राउजरहरू मोबाइल अनुप्रयोगहरू "Waze" o सिजिक। तिनीहरू धेरै राम्रा र अपडेट गरिएको नक्साका साथ छन्।
को बारेमा पहिले पत्ता लगाउनुहोस् जलवायु तपाईंले आफ्नो गन्तव्यमा फेला पार्नुहुनेछ, यदि अन्ततः प्रायद्वीप छोड्ने निर्णय गरे पनि। तपाईलाई थाहा हुनेछ कि यहाँको मौसम एक ठाउँ बाट अर्को ठाउँमा २०० २०० किलोमिटर भन्दा फरक हुन्छ।
ठूला ब्रीफकेसहरू नलिनुहोस्। तपाइँ केवल दुई दिन को लागी जाँदै हुनुहुन्छ। यो जाडो हो, त्यसैले न्यानो र आरामदायक कपडा लगाउनुहोस्। जे भए पनि भ्यालेन्टाइन डे भएकोले तपाईले मिति अनुसार कम कोट र कपडा लगाउन चाहानुहुन्छ, हामी त्यसलाई तपाईको छनौटमा छोडछौं।
यदि तपाईं विमानबाट जानुहुन्छ भने, सम्झनुहोस् कि तपाईं टेकअफ समय भन्दा कम्तिमा एक घण्टा अघि हुनुपर्दछ।
तपाईले जुन पनि विकल्प छनौट गर्नुभएमा हामी तपाईलाई खुशीको रोमान्टिक सप्ताहन्तको कामना गर्दछौं। सबै कुरा महान हुन सक!
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » गेटवे » रोमान्टिक » भ्यालेन्टाइन दिवस को लागी getaways
भ्यालेन्टाइन डे को लागी बिभिन्न योजनाहरु रहेका होटलहरु